Kungotamba | Martech Zone
Muvhuro, Kukadzi 1, 2010 Svondo, October 4, 2015 Douglas Karr
Pane rwiyo rwaLady Ga-ga rwakave kunze uko kwerinenge gore izvozvi rodaidzwa Just Dance. Handikwanise kuibvisa mumusoro mangu. Ini handisi mutsigiri mukuru weGa-ga-ooh-la-la… asi zvese zvinoridzwa zveTop 40 zvinoita kuti mwanasikana wangu akwidze redhiyo otanga kuimba. Ini handigoni kubatsira asi kuimba pamwe chete.
Ingori Dhanzi inoita kunge rwiyo rwekuti pamwe unenge uine zvishoma turu asi uchingosvetuka kunze padariro uye nekuregedza. Just Dance!
Vhiki rino ndiri muNew Orleans ndichiita sprint kutaura (me + sprint = zvinosetsa) ye Webtrends Shingairira musangano. Wangu wekutanga meseji kumakambani anoshuvira kuvaka bhizinesi ravo kubva kublogi ndeyekuve kumberi. Ivo vanofanirwa kuve pamberi pamberi pehunhu hwemeseji yavo. Ivo vanofanirwa kuve vari kumberi vachishandisa vezvenhau. Ivo vanofanirwa kuve vemberi mukati meinjini dzekutsvaga. Akazviita sei? Makambani anofanirwa kufuratira zvese zvinovhiringidza uye Just Dance kana zvasvika kuSocial Media. Tora zano, buda pasi uye uite.
Iwe hautore iyo yekutarisisa nekuve iwo wallflower.
Ndisati ndasiya airport kuIndipolis, ndakagamuchira email kubva kune wandinoshanda naye wandangosangana naye mavhiki mashoma apfuura. Ari kudaidzwa neWhite House kuti asangane neMutungamiriri nekuda kwekukurudzira kwaanga achitaura munharaunda yevatema. Yake nyaya inoshamisa uye meseji yake haisi iyo yaungafunge… iye akati 2010 ndiwo mugumo wezvikonzero zvevanhu kuti vawane hukuru hwavo. Hazvichakwanise kupihwa mhosva kune vamwe, munhu wega wega anofanira kuchera zvakadzika uye kurarama zvinoenderana nekwaniso yake yakapihwa naMwari. Ndiwo meseji ine simba kusimba kune wese munhu ... kwete vashoma chete munyika muno.
Icho chokwadi ndechekuti zviri nyore kwazvo kupfuura nemuhupenyu tichiita izvo zvatakaudzwa nevabereki vedu, vadzidzisi vedu, hurumende yedu… shanda nesimba, tenga mari, kuvaka 401k. Pakubhururuka pasi, ndanga ndichidya Linchpin: Iwe Unokosha Here?. Zvino sezvo vanhu vasiri pabasa, avo 401k aenda, vakarasikirwa nehurombo hwavo ... zviri pachena kuti chinzvimbo quo chave kungori nhema huru munhoroondo yeAmerica.
Seth Godin anonyora,
Nzira chete yekuwana izvo zvaunokosheswa ndeyokumira kunze, kushandisa simba repamoyo, kuti uonekwe seunokosha, uye kugadzira kudyidzana uko masangano nevanhu vane hanya nazvo zvakanyanya.
Regedza kutamba nemitemo uye uenderane nenhamba isingaperi yemamwe macogs (izwi raSeth Godin) iro raunza nyika ino netarenda rese uko kumabvi uye hupfumi hwedu hwakamira. Tsvaga yako niche, usaterere kune vanokanganisa ... tora chako chigunwe paburiro pasi uzvizunze.
Ndinovimba rwiyo urwu rwuchabatira mumusoro wako izvozvi…